भुल्ने बानी छ ? यी हुन् स्मरणशक्ति बढाउने पेयपदार्थ - DURBAR TIMES
HomeHealthभुल्ने बानी छ ? यी हुन् स्मरणशक्ति बढाउने पेयपदार्थ
पछिल्लो समय व्यस्त जीवनशैलीका कारण धेरै मानिसहरु आफू रोगको शिकार भएको थाहा नै पाउँदैनन् । स्वस्थ रहनका लागि शरीर र मस्तिष्क उर्जावान् बनाउने खानेकुरा खानु अत्यावश्यक छ । यदि तपाईंमा भुल्ने समस्या छ भने केही यस्ता पेयपदार्थहरु निकै लाभदायी हुन्छन् । जसको सेवनले स्मरणशक्ति समेत बढ्छ ।
Previous articleघर जल्दा १५ लाखको क्षति
Next articleअसार मसान्तभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गरिने